I-FAQ - Shenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd.
Iyiphi ibhulashi lokuhlanza ubuso elingcono kakhulu le-silicone?
Ibhulashi lokuhlanza ubuso le-silicone elenziwe ngezinto ezisezingeni lokudla ze-silicone zokuhlanza nokumasaji
"Ergonomics" design.Ukuphatha kalula, ukufanisa imiphetho yobuso.
Ubuchwepheshe be-Sonic: amazinga angu-6 wokuqina.
I-silicone yezinga lokudla ithambile kakhulu futhi iphephile ukuyisebenzisa.
Iyini ibhulashi lokuhlanza i-silicone?
Ibhulashi lokuhlanza i-silicone iyithuluzi elisetshenziselwa ukuhlanza ubuso.Ivamise ukunikwa amandla ibhethri elishajekayo futhi inyakazisa ama-bristles ukususa ukungcola namafutha ekujuleni kwezimbotshana.
Izinzuzo zebhulashi lokuhlanza i-silicone
Yethulwa njengethuluzi elinamandla lokuthuthukisa isimiso sakho sokuhlanza, ibhulashi lokuhlanza ubuso lingasetshenziswa "ukusiza ukususa yonke iminonjana yokugcina yokwenza, uwoyela kanye nemfucumfucu esikhumbeni. Ibhulashi lokuhlanza lingasiza ngempela ukwelapha induna ngokusiza ukuqeda i-acne i-sebum eyeqile edala ukuphuma kwezinduna. Udinga nje ukukhetha isihlanzi esifanele nesicoci esifanele. Noma yini enzima kakhulu ingabhebhethekisa izinduna. Zama kancane ukusebenzisa ibhulashi izikhathi ezi-2-4 ngeviki futhi uqaphele uma induna yakho iba yimbi. Uma kunjalo, sikala emuva noma uthathe ikhefu.
Ingabe ibhulashi lokuhlanza ubuso be-silicone lihlanzekile?
Amabhulashi okuhlanza i-silicone angamabhulashi ahlanzekile kakhulu njengoba engenazo izimbotshana ngakho-ke awanawo amabhaktheriya.Amabhulashi okuhlanza angase abe nenhlanzeko kakhulu kunamathawula noma izandla, kodwa kufanele uqinisekise ukuthi uwahlanza njalo.Ochwepheshe abaningi bazoncoma ukuhlanza ama-bristles ngensipho namanzi afudumele ngemva kokusetshenziswa ngakunye, bese bewahlanza kanye ngesonto nge-alcohol topical.
Yiziphi izisetshenziswa zobuso ze-ultrasonic ezingayenza?
Imishini yobuso ye-Ultrasonic isebenzisa ukudlidliza kwe-ultrasonic ukuletha imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba yekhwalithi ye-salon.Lezi zixhobo ezingahlaseli zisetshenziselwa.
Khuthaza ukugeleza kwegazi ngaphansi kwesikhumba ukuze kuthuthukiswe ukujikeleza kwegazi
Exfoliate amasu esikhumba esifile ukunikeza isikhumba ukukhanya kwemvelo
Susa amafutha amaningi esikhumbeni ngokusebenzisa ukugeleza kwe-ion enhle
Phusha ama-moisturizers kanye nokwelashwa kwesikhumba kujule esikhumbeni
Isula izimbotshana ezivalekile esikhumbeni futhi iqede amakhanda amnyama
Iyiphi idivayisi yobuso ye-ultrasonic engcono kakhulu yesikhumba esinenkinga?
Empeleni, kuya ngezinga lokunakekelwa okudingwa yisikhumba sakho.Ngenkathi usemncane futhi ungenakuqhathaniswa nezibonakaliso zesikhumba esiguga, njengemigqa emihle noma izikhwama ngaphansi kwamehlo, ungase ungakwazi ukuqeda amabala anamafutha kanye nezisihla.Isihlanzi se-ultrasonic esingangeni manzi futhi esenzelwe ukusetshenziswa nsuku zonke singaba yisixazululo esiphelele ezinkingeni zakho.
Ukudlidliza kwayo kwe-ultrasonic kuklanyelwe ukungena ekujuleni ebusweni besikhumba - lapho izinkinga ziqala khona - futhi kukhiphe ukungcola, amangqamuzana esikhumba afile namafutha angabangela izinkinga.Ama-soft bristles ahlinzeka ngokubhucunga okuthambile okuletha konke ukuvuselela okudingekayo ukugcina isikhumba sakho sinempilo.
Iyiphi idivayisi yobuso ye-ultrasonic engcono kakhulu yesikhumba esiguga?
Njengoba ukhula, izidingo zakho ziyashintsha - kanjalo nezidingo zesikhumba sakho.Kungase kube impi eqhubekayo ngokumelene nemigqa emihle namehlo akhukhumele, futhi isikhumba sakho singase siqale ukubonisa ezinye izimpawu zokuguga, njengokuhlehla kancane esilevini.Kodwa-ke, ngokukhungathekisayo, ungase ube nezinkinga nge-acne ngenxa yamafutha amaningi namabala omile ebusweni bakho.
I-Faicial Skin Scubber ingaba yingxenye ebalulekile yesimiso sakho sokunakekela isikhumba.Ukusetha kwayo "i-exfoliate" kusebenza njenge-exfoliator emnene, isusa amaseli esikhumba afile kanye nezindawo zezinkinga, kuyilapho imodi ye-ionic isiza isikhumba sakho ukuba simunce kalula i-toner kanye nesikhuthazisi osisebenzisa nsuku zonke.
Ingabe unalo ibhulashi lezimonyo elithile olifunayo?Bheka umhlahlandlela wethu we-makeup brush ngezansi ukuze uthole ulwazi oludingayo
1. Amabhulashi empuphu
I-Powder Brush Guide
Ibhulashi eliyimpushana livamise ukuba ibhulashi eliwugqinsi, elinefayibha egcwele - elokwenziwa noma lemvelo - elinokuguquguquka ukwenza imisebenzi yobuhle eyahlukahlukene.Leli bhulashi lezimonyo elitholakala yonke indawo (ngaphandle kwalokho ongakwazi ukuyithola kalula ikhithi yokwenza izimonyo) liyithuluzi elibalulekile kuzikhali zakho zokuzilungisa.
Ukusebenzisa ibhulashi njengesisekelo, cwilisa ibhulashi kumkhiqizo oyimpushana (owezimpushana nezimpushana ezixekethile) bese uzulazula noma ushanele uze ukwazi ukumboza.Ithiphu yochwepheshe: Kulula ukuqinisekisa ukumbozwa okugcwele uma uqala phakathi nobuso bakho futhi kancane kancane ulungisa indlela yakho yokuphuma.
Leli ithuluzi elihle kakhulu labaqalayo, elifaneleka kakhulu njengebhulashi lesisekelo samaminerali ngoba kulula ukulixuba nokusebenzisa emikhiqizweni yakho.
Kuzo zonke izinhlobo zamabhulashi e-makeup, ibhulashi eliyimpushana lilungele ukwengeza umbala uma ufuna umphumela ongokwemvelo, ongathintwa kancane, njengokufiphala.Cabanga ngezihlathi eziphinki esikhundleni sokubukeka okumangalisayo, okunethoni emnyama.
2. amabhulashi esisekelo
I-Foundation Brush Guide
Amabhulashi esisekelo anama-tapered ngokuvamile ayisicaba, anomumo ogcwele kancane kanye ne-taper elula.Lawa mabhulashi afaneleka kakhulu izisekelo kanye neminye imikhiqizo ewuketshezi.Uma unenkinga yokunquma ngohlobo lwesisekelo, funda kabanzi mayelana nezinhlobo ezihlukene zezisekelo LAPHA.Ukusebenzisa, qala ngokucwilisa ibhulashi emanzini afudumele bese ukhama ngobumnene ukhiphe okweqile.Uma kushisa futhi ujwayele ukujuluka, sebenzisa amanzi apholile ukuze uthole ulwazi oluqabulayo lohlelo lokusebenza.
Amanzi anezinjongo ezimbili lapha: ukuqinisekisa ijazi elilinganayo lesisekelo, nokuvimbela ibhulashi ekumunceni noma yisiphi isisekelo - ukongela imali njengoba ibhulashi lingeke limunce noma yiziphi izimonyo.Kodwa-ke, qaphela ukukhama ngobumnene noma yimaphi amanzi angaphezu kwethawula ukuze uwasuse.Amanzi amaningi anganciphisa izimonyo zakho futhi enze ukufakwa komkhiqizo kungasebenzi.
Yiziphi izinzuzo ze-electric foundation brush?
1. 2 izivinini ezikhethekayo, ezifanele uhlobo lwesikhumba oluhlukile
2. Anti-bacterial ibhulashi impahla, isikhumba-friendly
3. Unique shayela shape, kukwenza ungase uqedele izimonyo ngemizuzwana
Ungasigcina kanjani isikhumba sakho simanzi?
Isikhumba esomile sinokubukeka okuncane futhi okubuthakathaka, sibonakala sibonakala si-inelastic, siphelelwe amanzi, futhi singenalutho, futhi ngemva kokuhlanza, sivame "ukuqina."Isikhumba esibucayi, esomile ngokuvamile sibonisa izenzakalo zokuguga ngaphambi kwesikhathi: akumangalisi ukuthi imibimbi eminingi ivame ukubonwa esikhumbeni esomile kunesikhumba esinamafutha.
Imaski ezondla kakhulu ingasiza ukunikeza i-epidermis umthamo olungile wokukhipha amanzi ngalezi zici.Kungaba kuhle ukufaka imaskhi yobuso enkambisweni yakho yobuhle okungenani kanye ngesonto ekuvumela ukuthi uhlanze futhi umswakama, uthuthukise umphumela wekhilimu.
Ayini Ama-Blackheads Futhi Abangelwa Yini?
Ama-Blackheads ayaziwa nangokuthi ama-comedones.Lawa maqhubu amnyama avela esikhumbeni ngemva kokuba ama-whiteheads e-oxidize.Sinezimbotshana ebusweni bethu bonke, futhi imbotshana ngayinye inoboya obubodwa kanye nendlala kawoyela eyodwa.Izindlala ezikhiqiza uwoyela zaziwa nangokuthi izindlala ze-sebaceous.Nakuba i-sebum inegama elibi, isiza ukuthambisa nokuvikela isikhumba.Nokho, uma lezi zindlala zikhiqiza amafutha amaningi ngokweqile noma ambalwa, kungase kuthinte isikhumba sakho.Uma unesikhumba esomile, izindlala zakho zikawoyela azikhiqizi i-sebum eyanele ukugcina isikhumba sakho sinempilo futhi siswakeme.Ngakolunye uhlangothi, uma isikhumba sakho sinamafutha kakhulu, izindlala zakho zikhiqiza i-sebum eyeqile.Lapho isikhumba sakho sikhiqiza i-sebum eyeqile, futhi sihlangene namaseli esikhumba afile, singavala izimbotshana eziholela ekubonakaleni kwamakhanda amnyama.Ngeshwa, izimbotshana ezivalekile ziyindawo enhle yokuthi amagciwane alwele okuholela ezifweni ezibuhlungu ngendlela yezinduna namabala.
Ezinye izici ezingase zibe zimbi futhi zibe nomthelela ekubukeni kwama-blackheads ukungalingani kwe-hormonal, ukudla okungenamsoco, ukucindezeleka, ukungcola, ukujuluka, njll.
Uyini umsebenzi we-microcrystalline blackhead remover?
Umshini wokuhlanza i-Microcrystalline blackhead remover, okuyithuluzi lobuhle elinemisebenzi eminingi, njenge-Dermabrasion, i-compact, izimbotshana ezihlanzekile, ukukhipha izinduna kanye nokumunca amakhanda amnyama.Ukusebenzisa izinhlayiya ezingaphezu kuka-100,000 ze-micro-crystal drilling nge-vacuum suction ukuze kuqedwe ungqimba lwangaphandle lwesikhumba esiguga nezimbotshana zokungcola, ukuze izimbobo zibe ukuhlanza okwengeziwe, futhi isikhumba sakho sizoba bushelelezi, sibe mhlophe futhi sithambile.Iwubuchwepheshe obungahlanyisi futhi obungacasuli obungalawula izinga ledermabrasion ngebha yokumunca ekuqineni kwedayimane.Ngesikhathi esifanayo, ukwakheka oku-4 okuhlukene kwama-probes kunemisebenzi ehlukene, njenge-microdermabrasion, ukuhlanza i-pore nokunye.
Sisebenza kanjani isikhiphi se-Microcrystalline Blackhead?
Uhlobo lwe-vacuum pressure edonsa ubuchwepheshe bobuso bomumo we-V
1. Ngesistimu yokumunca i-vacuum, ingadonsa futhi ibhucucuze isikhumba sakho, ikhuthaze ukujikeleza kwegazi ne-lymph, ikhuthaze umzimba we-metabolism, ukuze izicubu zesikhumba zithole izithasiselo zokudla okunomsoco okwanele, ukuze isikhumba siqine futhi sibushelelezi.
2. Thuthukisa ukungena kwesikhumba, ukuze isixazululo sobuhle sijule esikhumbeni sesikhumba, ngaleyo ndlela sithuthukise umswakama wesikhumba, senze isikhumba sikhanye kakhulu.
3. Khuthaza ama-collagen fibroblasts ukuze akhiqize imicu ye-collagen, akhulise ikhono lokuzivikela lesikhumba, ukugwema ukulimala okungcolile kwamahhala esikhumbeni, ugcine ukushuba kwesikhumba nokunwebeka.
4. Khuthaza ukuvuselelwa kwamangqamuzana esikhumba futhi uthuthukise amasosha omzimba kanye namandla okuzivikela e-UV, i-tissue melanin precipitation ebusweni ukugcina ukukhanya kwesikhumba, isikhumba siba nempilo kakhudlwana.
5. Thuthukisa i-microcirculation yesikhumba, ikhuthaze i-melanin metabolism, ngaleyo ndlela inciphise amabala esikhumba e-melanin.
Iyini i-blackhead remover microcrystal head?
I-Microcrystalline probe kumaminerali emvelo izinhlayiya ze-microcrystalline drill, ingasusa ngobumnene i-cuticle, khona-ke isikhumba sakho sizobukeka sibushelelezi futhi sivuseleleke, sizosusa ngobumnene imfucumfucu engaphezulu, kuyilapho umsebenzi wokukhangisa, ungakhuba Okungcola kukhishwe ngaphandle, bese ususa amangqamuzana esikhumba ngenkathi ukhuthaza ukujikeleza kwegazi, kulungele ukuvuselelwa kwemvelo kwamaseli ukugcina isikhumba sibushelelezi, sivuselela ukucwebezela okuncane.
Ezinye izici ezingase zibe zimbi futhi zibe nomthelela ekubonakaleni kwamakhanda amnyama ukungalingani kwama-hormone, ukudla okungenamsoco, ukucindezeleka, ukungcola, ukujuluka, njll.
Aphi Ama-Blackheads Ajwayelekile Kakhulu?
Amakhanda amnyama avame kakhulu ebusweni ngoba anomthamo omkhulu wezindlala zikawoyela.Ngokujwayelekile, i-t-zone (ebunzini nasekhaleni) ijwayele ukuba nama-blackheads ngoba izindlala kulezi zindawo zivame ukukhiqiza i-sebum eningi.Isifuba kanye nomhlane nakho kuvame ukuthintwa ama-blackheads.Iqiniso elithakazelisayo, izintende zezandla nezinyawo kuphela ezingenazo izindlala zikawoyela.
Iyiphi indlela efanele yokusebenzisa isikhiphi se-blackhead vacuum?
Ukubuka ai-blackhead vacuum removeremsebenzini nge-YouTube yinto eyodwa—empeleni ukusebenzisa eyodwa ngendlela efanele kuwumdlalo webhola ohluke ngokuphelele.Khumbula-ukusebenzisa kabi kungaholela ekuvuvukeni, ukulimaza okuncane, noma ngisho nama-capillaries aphukile (futhi, ngokusobala, akekho ofuna lokho).
Umdwebi uphakamisa ukusebenzisaama-blackhead vacuum removersesikhumbeni esihlanzekile, esomile, kanye nokusebenzisa idivayisi kusukela phakathi kobuso bakho kuya ngaphandle ngamafushane, imivimbo eyodwa.“Isihluthulelo siwukunyakaza njalo,” echaza, echaza ukuthi awufuni ukuvumela i-vacuum ihlale endaweni eyodwa isikhathi eside."Ukufaka ingcindezi enkulu endaweni eyodwa kungabangela ukuhlukumezeka esikhumbeni."
Iyini i-ultrasonic skin scrubber?
Imvamisa eyaziwa nangokuthi i-skin scraper, i-ultrasonic skin scrubber iyisisetshenziswa esisebenzisa amafrikhwensi aphezulu ukuqoqa ukungcola namafutha ezimbotsheni zakho.
Uma ucabanga ukuthi abahlikihli besikhumba be-ultrasonic basebenzisa ukudlidliza ukuze bahlanze isikhumba sakho, khona-ke uqinisile.Kodwa-ke, esikhundleni sefomu lenjoloba, lezi zikhuhla zenziwe ngensimbi futhi zisebenzisa ukudlidliza kwe-high-frequency ngokusebenzisa amaza omsindo ukushintsha isikhumba sisuka kwelinye iseli siye kwelinye.Lezi zikhumba zesikhumba ze-ultrasonic zikhipha isikhumba ngobumnene futhi ziqoqe lokho okuchithiwe.
Yiziphi Izinzuzo ze-ultrasonic skin scrubbe?
Ukuhlanza okujulile kwesikhumba
Ithuthukisa ukuthungwa kwesikhumba kanye nethoni
Imnene kunezinye izinhlobo zokucwenga
Izikhuhla zesikhumba ze-Ultrasonic ziphinde zikhiphe ukuze kube nokukhanya okukhazimulayo, futhi zikhuthaza ukukhula kwe-collagen entsha ukugcwalisa imigqa emihle, okwenza isikhumba sibukeke sigcwele, sisha futhi sikhazimula ngokwengeziwe.
Izihlikihli zesikhumba ezihamba phambili ze-ultrasonic ziza ngezilungiselelo ezihlukahlukene ukuze abasebenzisi bazijwayeze amasu okunakekela isikhumba ngokuphepha kanye nokuba yimfihlo kwekhaya labo.
Ngingakwazi ukusebenzisa ibhulashi lokuhlanza ubuso uma nginezinduna ebusweni bami?
Akukhona nje kuphela ukuthi ingasetshenziswa, kodwa ingakusiza futhi ukuhlanza kangcono induna.Ibhulashi linomphumela wokuhlanza ngokujulile ama-pores.Ingasusa amagciwane, uthuli, ukungcola, amafutha ezimbotsheni, futhi ingahlanza kangcono isikhumba.
Uma usebenzisa amafutha ekwelapheni induna, ukungcola esikhumbeni akusekho, futhi amafutha azomunca kangcono.Lapho ukhetha ibhulashi, khetha ibhulashi elinama-bristles athambile futhi amade ukuze lingalimaza isikhumba.
Nakuba ungasebenzisa ibhulashi lokuhlanza ubuso, awukwazi ukulisebenzisa nsuku zonke.Awukwazi ukuyisebenzisa izikhathi ezingaphezu kuka-1-2 ngesonto.Ngaphambi kokuyisebenzisa, kufanele uhlanze ikhanda lebhulashi noma amabhaktheriya azogijima ebusweni bakho.
Kodwa akuwona wonke ama-acne angasebenzisa ibhulashi lokuhlanza ubuso, uma i-acne yakho evuvukalayo ifinyelele ukulinganisela kuya kobunzima, awukwazi ukuyisebenzisa.
Ingabe kukhona okungalungile ngebhulashi lokuhlanza ubuso?
Isibonelo, amantombazane ane-psoriasis noma i-eczema awakwazi ukuyisebenzisa.Uma ubuso bushiswe yilanga futhi kunesikhumba esiphukile, akufanele sisetshenziswe.
Isihlanzi Sobuso sikagesi
Kulabo abanemisipha ebucayi, kunconywa ukuthi usebenzise ibhulashi lokuhlanza ubuso kanye kuphela noma kabili ngesonto.Uma uyisebenzisa, ungayisebenzisi isikhathi eside, futhi ungacindezeli kanzima esikhumbeni.Kodwa ungakhathazeki kakhulu ngodade abancane abanezicubu ezizwelayo.Kunamabhulashi amaningi okuhlanza ubuso angasetshenziswa emisipha ebucayi.Isibonelo, amabhulashi obuso e-silicone avikela amagciwane angasetshenziselwa imisipha ebucayi.
Uma ungacaci kahle ngesikhumba sakho, ungaya esibhedlela uyofuna udokotela ozokusiza ukuthi ubone.